fomba tsara indrindra zavamaniry mena mafana poker
ny fomba tsara indrindra mba haka ny loka slot machine
Pala Casino Spa & Hampiasa ny vaovao $5.6 tapitrisa 10-acre RV fialan-Tsasatra any amin'ny Lalambe 76 akaikin'ny hotel casino dia misokatra ho an'ny raharaham-barotra volana manaraka toy ny casino nanamafy ny 23 May fanokafana ny daty fomba tsara indrindra sary slot canyon. Ny vaovao RV fialan-Tsasatra amin'ny Pala any amin'ny faritra avaratr'i San Diego County endri-javatra 100 fanompoana manontolo toerana sy vahiny afaka misafidy avy amin'ny iray amin'ireo toerana telo ny habeny, anisan'izany 77 20'x55' ny miverina amin'ny toerana, 17 20'x70' fihoaram-amin'ny toerana, dia enina 20'x60' mihaja toerana amin'ny barbeque fefy, ary 20-toerana amin'ny 30-50 diem hery fomba tsara indrindra zavamaniry mena mafana poker. Ny rendrarendra Resort fatratra clubhouse endri-javatra roa spas sy mafana dobo filomanosana. Ny toerana rehetra dia ahitana: Anaty trano amenities amin'ny vaovao RV Resort ahitana ny lalao, ny billiard latabatra, karatra latabatra, telo fisaka-efijery TV sy ny laundromat ny fomba tsara indrindra mba hametraka ny filokana amin'ny roulette. Ivelan'ny trano amenities ahitana dimy barbeque subscribe faritra, tenisy ambony latabatra, kitron-tsoavaly an-davaka, sy ny mimanda alika park.
Pala ny vaovao RV Resort lasa mpikamban'ny ny faritra roa hafa trano filokana izay efa natokana RV foto-drafitrasa; ny BlueWater Resort sy ny Casino akaikin'ny Parker, Arizona sy ny natalie hills Resort & Casino akaikin'ny sor amnuaysirichoke. Ity farany fanitarana dia iray monja amin'ireo telo ny Pala, California toerana dia nandalo koa satria ny $100 tapitrisa fanitarana sy fanavaozana tamin'ny taona 2009. Tamin'ny taon-dasa ny trano vita kokoa ny tetikasa, indrindra indrindra, lava-bato, dia nisy ny 6.000-kianja-tongotra trano fisakafoanana, trano fisotroana sy fandraisam-bahiny izay endri-javatra iray fialam-boly sarotra sy ambanin'ny tany divay lava-bato.
Tompon'ny sy niasa ny Pala Tarika ny asa Fitoriana ny Indiana ny 90,000 amin'ny tora-droa tongotry casino endri-javatra 2,000 slot sy lahatsary milina, 87 latabatra ny lalao sy ny poker efitrano 13 ny latabatra. Misy ihany koa ny 11 trano fisakafoanana, roa lounges amin'ny velona ny fialam-boly isan'andro, ary ny 2,000 seza Pala ny Zava-nitranga Foibe, eo amin'ny hafa ny amenities ary manintona ny fomba tsara indrindra mba haka ny loka slot machine. Ny casino nanokatra ny varavarany ho an'ny fotoana voalohany tamin'ny volana aprily, 2001..
Ahoana no hanome ny filokana
Ahoana no hanome ny filokana milina